I-Ning: Ukufumana kunye nokuFomatha ii-API zemibuzo | Martech Zone
NgeCawa, Agasti 24, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kule mpelaveki bendisebenza kwiprojekthi apho besifuna ukutsala umxholo kuyo yonke indawo Incinci i-Indiana (yakhiwe nge Ning) kwiphepha eliphambili. Inkqubo ye- Umnyhadala waseIndianapolis Fringe kugcwele kwaye uSmall Indiana wayefuna ukunceda ukukhuthaza umsitho.
I-API ye-Ning ayilolungelelwano kakhulu, kwaye amaxwebhu kunye nokusetyenziswa kwesampulu kusilela ngokwenene. Ngenxa yexesha elithintelayo ukwenza iphepha lisebenze, kuye kwafuneka ndithathe iindlela ezimfutshane kunokuba ndakhe isisombululo esifanelekileyo. Iphepha langoku liyasebenza, kodwa linekhowudi enzima ngaphandle kokuguquguquka okukhulu. Kusenokwenzeka ukuba kubekho ukungqinisisa okungakumbi komxholo (umzekelo: ukuqinisekisa ukuba ii-blog zeblog zifomathiwe ngokwahlukileyo kwii-urls zeforam, njlnjl.).
Indlela ka-Ning API Umsebenzi kukuba iyinjini yokubuza apho unokufumana khona iziphumo ozifunayo kwi-RSS feed. Sicele ukuba nabani na obhlogayo, oqala ingxoxo, okanye ofaka iifoto ngokukhethekileyo amake umxholo wazo Indyfringe-2008. Oku kundivumela ukuba ndakhe idilesi yokondla yesiqhelo efumana yonke imixholo (ngokuhla ngokulandelelana komhla opapashiweyo ngale URL ilandelayo:
Ngaphakathi kwiphepha, emva koko ndikhuphe kwaye ndiququzelele idatha kwiphepha ndisebenzisa Iklasi yeMagpie RSS ye-PHP. Cofa ukusondeza kwikhowudi okanye unako jonga okanye ukhuphele.
API kwaye uyiFomathile "ububanzi =" 300 "ukuphakama =" 159 "iklasi =" ulungelelwaniso lobungakanani-obuphakathi wp-image-2694 ″ />
Kukho ukusebenza okunomdla apha. Enkosi ku UTyler Ingram (kwikhaya lam lesikolo esiphakamileyo saseVancouver!) Abancedise ukufomatha imihla ngokuchanekileyo nge-Twitter.
Kwakhona, ayisiyeyona khowudi icocekileyo kwaye ayikophulwanga ngokufanelekileyo kwimisebenzi yokusetyenziswa ngokukhawuleza- kodwa iyasebenza. Nditshintsha amakhonkco ukuze ii-urls zijolise ngokufanelekileyo, ndisuse naziphi na iithegi ze-HTML kumxholo obandakanyiweyo, ndifomate umhla, kwaye ndibeke umda kwinani lamagama abonisiweyo ukuze iziphumo zephepha zibonakale ngoluhlobo:
Olunye u-Babble kwi-Babbling Banshee Njengophononongo lwam lweNtlungu elungileyo, uSidney bekukho iibits zokuthanda kunye neebits not… 8/24 11:55 AM
le API Isibonelelo esikhulu kuba ungabhalisela umxholo kunye nezihloko kwiinethiwekhi zeNing ezimakwe ngokukodwa, okanye ungadibanisa iwebhusayithi yangaphandle kunye nomxholo weNing. Ndiyathemba ukuba u-Ning usebenza kwizicelo zesampulu kunye namaxwebhu ukuze abantu abanjengam bakwazi ukwenza oku ngaphandle kokuchitha ixesha elininzi!